छारे रोग - विकिपिडिया
छारे रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशु समेतमा देखा पर्ने एक किसिमको मानसिक रोग हो। यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने, आदी विभिन्न नामहरू दिएको पनि पाइन्छ। प्राय जसो कमजोर दिल भएका व्याक्तीहरूलाई छारे रोगको रोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यो रोग लाग्ने रोगीले कहिले कतिखेर र कहाँ लाग्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्दैन तर पनि धेरै मानिसको भेला, रंगी विरंगी कपडा, आँखा तिरमिराउने घाम, नदीमा उफ्री रहेको पानी र पञ्चेबाजाको धुन सुने पछि यो रोगका रोगीहरू अचानक मुर्छा (अचेत) अवस्थामा भएर लडेको देखिन्छ। यो रोगको रोगीलाई ग्यारण्टीका साथ निको पार्न सकिने कोही ईलाज त छैन तर पनि कति पय डाक्टर तथा वैद्यहरू मिर्गिको रोगी ठिक बनाउन सकिने दावि गर्छन्। छारे रोगीको अपरेसन नगर्दा सम्म ठिक नहुने कति पय डाक्टरहरूको भनाई रहेको छ। यो एक दिमागी रोग भएका कारण अपरेसन गर्न साह्रै खर्चिलो र अप्ठ्यारो पनि हुन्छ।
छारे रोग एक दिमागी दौरा हो यदी यो रोगको रोगीले अचानक आँखा तिर्मिराउने र मन झस्किने संयोग पाएमा एक्कासी मुर्छा भएर ढल्न पुग्छ। उत्तानो परि सके पछि हात खुट्टा छटपाउँछ। केही बेर हात खुट्टा छटपटाएर मुखबाट राल छोडेर करिब आधा घण्टा सम्म रोगी वेहोस हुन्छ। आधा घण्टा पछि रोगीलाई होस आउँछ।
छारे रोगको कारणहरु[सम्पादन गर्ने]
छारे रोग बच्चादेखि बुढासम्म सबैलाई हुनसक्छ . बच्चा हुने मस्तिस्कको सक्रमण, मस्तिस्कमा अक्सेजनको मात्रा कम हुनु, मस्तिस्कमा चोट लाग्नु आदि कारणले बच्चामा यो रोग देखा पर्दछ.बयस्क मानिसमा यो रोग जुगाको अन्डा, टाउकोको चोटपटक , मस्तिस्कको टूमोरले हुन्छ भने बुदेस्कलमा भने यो रोग पक्छ्याघात, मस्तिस्कको टूमोर वा मस्तिस्कको चोटपटकले हुन सक्छ.
विकिमिडिया कमन्समा छारे रोग सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=छारे_रोग&oldid=1034503" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:१५, ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।